Mpampiasa an-jatony maro no mamotika ny iPhone 7 noho ny horonantsary sandoka | Vaovao momba ny gadget
Mpampiasa an-jatony maro no mamotika ny iPhone 7 azy ireo noho ny horonantsary sandoka
Ny TechRax indray dia manaparitaka izany amin'ny tambajotra, amin'ity indray mitoraka ity dia mamorona fampianarana video momba ny fomba hamerenana ilay 3,5mm Jack amin'ny iPhone 7. Iray amin'ireo vaovao mampiady hevitra indrindra momba ilay finday vaovao amin'ny paoma, dia io tokoa no manafoana ity mpampitohy analogika mahazatra ity izay ahafahantsika mampifandray ireo headphones nentin-drazana. Ankehitriny dia tsy afaka nampifandray ireo headphones fotsiny izahay tamin'ny alàlan'ny adapter Lightning azy ireo ary tamin'ny alàlan'ny EarPods ampidiriny. SNa izany aza, ity horonan-tsary mamoafady ity dia mampiseho amintsika ny fomba ahafahantsika mamerina ilay mpampitohy Jack 3,5mm antsika amin'ny alàlan'ny fandavahana kely sy tsotra mandritra ny androm-piainana.
Tokony hotadidintsika fa ny AirPods, headphone tsy misy tariby an'i Apple, dia vidiny tsy latsaky ny € 179, ka nanapa-kevitra ny TechRaz ny hampakatra an'ity horonantsary ity izay nahazoany ilay mpampitohy Jack 3,5mm tamin'ny fotoana fohy. Amin'izany fomba izany no andraisan'ny mpiara-miasa ny fanomanana, manomboka ny fandavahana ary atomboka amin'ny lavaka. Ny tena ataon'ny vady dia lavaka lalina 14mm, miaraka amin'ny fikasana hamorona lavaka ampy hampidirana ireo EarPods mahazatra. Raha ny marina dia izao no ataon'ny mpiara-miasa, hampahafantatra azy ireo any aoriana ary hampiakatra ny horonantsary "mody niasa" tamin'ny fampidirana azy ireo tao anaty lavaka tsotra.
Ny olana dia tonga amin'ireo mpampiasa izay tsy afaka nisambotra fa horonantsary mahatsikaiky izy io, ary nanomboka namela hafatra hampahatsiahy ireo mpampiasa hafa tsy hanao asa mitovy amin'ny mpiara-miasa TechRax, fanehoan-kevitra toy ny Aza manandrana azy, ny iPhone-ko nijanona tsy niasa fotoana fohy taorian'ny nanaovana ilay lavaka ary tsy afaka mihaino mozika aho«. Raha fintinina, tsy fantatsika raha toa ny troll ny fanehoan-kevitra kokoa noho ilay horonan-tsary, na tena tsy nitandrina izy ireo mba hamenoana ny lavaka toy izany. Farany, ity no zava-nitranga tamin'ny iPhone 7 sy ilay sakaizantsika sakaizan'ny TechRax YouTube fantsona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Mpampiasa an-jatony maro no mamotika ny iPhone 7 azy ireo noho ny horonantsary sandoka
Mandainga amin'ny lainga ihany no misy an'io horonan-tsary maninona no nanao izany ny antony nahatsapany azy satria efa nesorin'i ifixit ny iray ary nasehony fa tsy mitondra izany ka aza mandainga. Olona mpitovo io ary fantany fa tsy izy no nitondra.
Aiza ireo olona an-jatony ireo? Iray ihany ny horonan-tsary amin'ny Internet an-jatony, tsy mino aho. Heveriko ihany koa fa lainga ny famoahana ny famoahana.
179 euro no vola ho anao? Ny headphone audio farany dia manisa mihoatra ny 5 euro na piano piano farany manisa 2000 euro ary tafiditra ao an-tànana. 180 dia tsinontsinona. Manana iPhone aho fa tsy manana ilay app ho anao mandoa, izany no tadiaviko ary tsy vitako
raphas dia hoy izy:
Juan, misy fianakaviana miaina miaraka amin'io vola isam-bolana io, ny fahatsapana kely
Mamaly an'i Rafas
John L. dia hoy izy:
Salama Rafas, marina ny voalazanao, fa ireo olona ireo dia tsy nividy faran'izay karazana sy vidiny ary raha te hitahiry izany dia tsy mila an'ireo mpandahateny ireo izy.
Valiny tamin'i Juan L.
Niala tamin'ny fanamboarana smartphone i BlackBerry
Tizen amin'ny Huawei Watch manaraka?